Solitaire 🥇 Midira ary mankafiza amin'ny Emulator.Online
manirery Is a lalao karatra ho an'ny olona iray. Satria milalao irery ny lalao, ny tanjona lehibe dia ny tsy hianjera amin'ny mpanohitra, fa ny famahana ny lalao, ampiofano ny fisainanao lojika, ary indraindray ampiasaina amin'ny fisaintsainana aza.
Solitaire: Ahoana no filalaovana tsikelikely? 🙂
Manao a manirery an-tserasera maimaim-poana, mila fotsiny ianao araho tsikelikely ireto torolalana ireto:
Dingana 2. Raha vantany vao miditra amin'ny tranokala ianao dia efa hiseho eo amin'ny efijery ny lalao. Ianao ihany no mila hilalao kilalao ary afaka manomboka misafidy solitaire tianao indrindra ianao. Azonao atao ny misafidy ny fahasarotana mifanaraka amin'ny haavon'ny lalao.
Aorian'ny fisafidianana azyAzonao atao ihany koa ny misafidy ny isan'ny sombin-javatra hananan'ny piozila.
Dingana 4. Mahazoa manafoana ny karatra rehetra amin'ny lalao mandresy. Ho an'ity dia tsy maintsy apetrakao amin'ireo karatra maromaro ireo karatra ireoIlay loko mitovy sy milahatra milamina.
Dingana 5. Rehefa vita ny lalao iray dia kitiho "Haverina velomina" Manamboatra solitaire hafa
Inona no atao hoe Solitaire? ????
manirery (antsoina koa hoe solitaire na solitaire amin'ny teny frantsay) dia lalao karatra ho an'ny olona iray. Ny fandikana avy amin'ny frantsay dia mampiseho tsara ny momba azy. Raha adika, midika izany "faharetana". Ny karazana takelaka samihafa dia azo ampiasaina hilalao solitaire, na ny mallet espaniola como el ny poker.
Misy izany karazany isan-karazany an'ny solitaire izay mamela antsika hanana sosokevitra be dia be hahafinaritra.
Ny iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny fahombiazany dia mifototra amin'ny fahafaha-milalao olona tokana, tsy misy mpifaninana. Manao azy lalao tonga lafatra mba hiala sasatra sy hisaintsainana.
Tantara Solitaire 🤓
Manirery dia a anarana amin'ny karazana lalao karatra isan-karazany. Ny lalao malaza indrindra eo amin'izy ireo dia fantatra amin'ny anarana hoe "Solitaire mahazatra"Tsy fantatra ny tena niandohan'ny lalao, fa ny fandaminana ny karatra dia avy amin'ny taratra tarot izay nampiasaina tamin'ny sikidy. Tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX, dia niresaka voalohany ny lalao tany Eropa Avaratra, ary lasa ny lalao Frantsa tamin'ny voalohan'ny taonjato faha-XNUMX.
Napoleon Bonaparte dia voalaza fa nilalao solitaire matetika nandritra ny sesitany tany Saint Helena tamin'ny 1816. Tao anatin'ny taona vitsivitsy dia lasa fialamboly malaza tany Frantsa ny lalao ary nandresy tamin'ny farany an'izao tontolo izao, anisan'izany i Alemana. Ny teny irery irery (ohatra, "boaty") dia avy amin'ny teny frantsay.
Na ankehitriny aza dia mbola fialamboly ankafizin'ny olona maro ity lalao malaza ity. Iray ihany no ilainao tokotanin-karatra, ambonin'ny mahitsy ary fitsipika tsotra vitsivitsy. Ara-dalàna izany afaka milalao ity lalao ity ny tsirairay.
Ny manirery dia a endrika fialamboly tsy sarotra nanomboka tamin'ny fotoana mbola nanam-potoana ny olona ary mbola tsy maika loatra izao tontolo izao. Tsy maninona na dia lalaovinao amin'ny fomba mahazatra (tanana) na amin'ny solosaina farany aza izany - miala sasatra sy mampiofana ny sainao ary malaza kokoa ankehitriny noho ny taloha!
Ny tantaran'ny lalao solitaire amin'ny solosaina
Taorian'ny fisian'ny PC voalohany teny an-tsena dia dingana lozika fotsiny ny filalaovana kinova nomerika an'ny solitaire ao aminy. Satria mila milalao karatra eo amin'ny efijery hery informatika kely, lalao marobe no niseho tao anatin'ny fotoana fohy. Tamin'ny vanim-potoana MS-DOS, ny ankamaroan'ny lalao dia mifototra amin'ny lahatsoratra ary natao ho an'ny mpilalao tokana.
Na izany aza, nanjary haingana kokoa sy maoderina ny solosaina, amin'izay dia nanatsara ny fahafaha-manao sary amin'ny lalao. Ny fahaizan'ny fahatsiarovana nitombo dia namela ireo mpandahatra programa hametraka lalao maro ho programa iray ihany. Toy izao no namoronana ny fanangonana lalao solitaire iray manontolo.
Ny fanangonana ara-barotra voalohany dia "Solitaire royaleNosoratan'i Brad Fregger ary navoakan'i Spectrum Holobyte tamin'ny 1987. Mety ho an'ny PC (MS-DOS) sy Macintosh ny lalao. Ahitana karazany valo hafa, mihazakazaka miaraka amin'ny loko 16 EGA misy sary ary niasa totozy.
Taona vitsivitsy taty aoriana, tamin'ny 1992, QQP (Famokarana kalitao Quantum) nanangana fanangonana lehibe antsoina hoe "Ny dia nataon'i SolitaireNavoaka ho an'ny MS-DOS ity lalao ity ary mirakitra isa mahaliana 105 isan-karazany amin'ny lalao, ary koa statistika amin'ny antsipiriany ho an'ny lalao tsirairay! Afaka misafidy kilalao ny mpilalao ary tsy handamina ny diany (dia) fotsiny, fa mandray anjara ihany koa amin'ny asa fitoriana (quests) ary mahazoa isa fanampiny any aorian'ny fandresena amina fihodinana vitsivitsy.
Microsoft Windows Solitaire Niseho voalohany tao amin'ny Windows 3.0 tamin'ny taona 1990. Tamin'ny 1995, Windows 95 dia namoaka ny lalao Freecell. Nanjary malaza be i Freecell tao anatin'ny fotoana fohy, ary maro ny kinova shareware amin'ny lalao no niseho. Farany, Solitaire dia niseho niaraka tamin'ny Microsoft XP Spider, arahin'ireo knockoffs vaovao sy kinova nohatsaraina.
Androany, misy ny lalao isaky ny sehatra azo eritreretina, ao anatin'izany ny takelaka sy finday avo lenta. Na aiza na aiza misy anao dia misy foana ny karazana solitaire azo ampiasaina amin'ny fialan-tsasatra sy fahafinaretana!
Ahoana no fomba filalaovana solitaire: Torohevitra ♥ ️ ♠ ️ ♣ ️
Soso-kevitra 1: Miasà aloha amin'ny karatra solitaire etsy ambany
Solo, tokony hampiasa ireto karatra manaraka ireto tokoa ianao, satria ireo empona ireo dia tokony hofoanana aloha.
Jereo raha azonao atao ny mametraka ireto karatra manaraka ireto eo amboniny. Raha afaka mamindra karatra marobe indray mandeha ianao dia tokony hampiasa ilay antontam-bato miaraka amin'ireo karatra vitsy an'isa ho mpitari-dalana.. Amin'ity fomba ity no ahazoanao seza banga haingana kokoa eo ambaniny.
Avy eo ianao dia afaka mameno haingana ireo habaka banga indray. Ahariho fotsiny ny stack ambony rehefa tsy afaka mihetsika hafa ao ambany ianao.
Soso-kevitra 2: tsy maintsy miakatra avy hatrany ny ace tsirairay
Aza adino ny mamindra ny aces avy hatrany.
Marina indrindra izany ho an'ny aces izay ao amin'ny iray amin'ireo piles ambany. Manosika azy ireo amin'ny tananao ho iray amin'ireo toerana malalaka ianao. Raha tsy izany, kitiho indroa ny ace.
Tokony afindrao eo ambonin'ny antontam-bato avy hatrany koa ny aces. Noho izany, mety hanana fotoana hifindrana karatra bebe kokoa ianao amin'ny iray amin'ireo fantsona ambany.
Torohevitra 3: apetraho amin'ny toerana malalaka ny Lone King
Miasa ny bateria arak'izay azonao atao. Mila ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpanjaka ianao.
Raha vantany vao manana toerana malalaka aho, tsy maintsy mameno mpanjaka azy. Avy eo apetaho tsirairay ny karatra hafa rehetra. Amin'ity fomba ity dia azonao atao ny mametraka ireo litera rehefa avy eo.
Raha afaka mifidy mpanjaka roa ianao, ianao dia tokony handinika ny loko ahafahanao mametraka ny ankamaroan'ny karatra.
Toy izany koa no miantraika amin'ny teboka maimaim-poana roa. Fenoy tsara amin'ny mpanjaka mainty ity ary indray mandeha amin'ny mpanjaka mena. Izany dia mampitombo ny fahafaha-milalao karatra marobe amin'ny fotoana iray.
Torohevitra 4: ovao ireo karatra
Raha tsy afaka mihetsika intsony ianao na raha toa tsy misy lojika aminao dia tsy maintsy miova ianao.
Jereo ireo karatra ary mifamadiho eo amin'izy ireo mba hahafahanao mametraka karatra vitsivitsy eo amboniny.
Zava-dehibe ny fanovana ary matetika no hany fomba fifehezana ny lalao.
Raha tsy mahita fiaran-dalamby intsony ianao, kitiho ilay entana "SOSO-KEVITRA"ao amin'ny menio. Amin'ny lalao sasany dia azonao atao ihany koa ny manindry ny" T "amin'ny klavier ary hasehon'ny lalao anao izay mety ho hetsika.
Karazana Solitaire 🃏
Misy karazany maro ny solitaire, izay mitaky tokana mihoatra ny iray ary haavo hafa amin'ny mpilalao. Ny lisitra etsy ambany dia manarona karazana solitaire isan-karazany, manomboka amin'ny Klondike sy Spider kilasika ka hatramin'ny lalao izay mila hafainganana na, ho an'ny zazavavy, lalao iray izay tsy maintsy anontanianao ny karatra sy hanaingoanao ny maodely tsirairay.
Ny kilasika amin'ny kilasika! Alefaso amin'ny Ace ny karatra Ace, saraho arakaraka ny akanjo. Mba hanaovana izany dia zarao ho lasa tsanganana ny karatra, ary miovaova hatrany amin'ny karatra mena sy mainty mandra-pahatongan'ny fipetrahana manontolo. Rehefa mahita ace ianao dia aparitaho eo an-tampon'ny efijery ary apetraho eo amboniny ireo karatra hafa.
Hafa kely noho ilay teo aloha, amin'ity solitaire ity dia tsy maintsy alaminao ny karatra manomboka amin'ny King to the Ace. Ary koa, manana palitao iray ihany ianao eo ambonin'ny latabatra, na eo aza izany dia haverina imbetsaka ireo karatra, ahafahanao manao mihoatra ny iray ny filaharana baiko.
Ny tanjon'ity lalao ity dias esory ny piramidan'ny karatra iray manontolo, ampifanarahina tsiroaroa izy ireo izay manampy hatramin'ny telo ambin'ny folo katroka mba hanala azy ireo amin'ny efijery. Ho fanampin'ireo karatra apetraka ao amin'ny piramida dia manana karatra fanampiny telo ianao izay tsy maintsy ampiasaina hamongorana ny hafa sy hanafahana ireo karatra izay eo ambany, miampy toerana fanampiny hanasaraka ny iray amin'ireo karatra.
Ny làlana dia azo adika ho "zotra" ary mamintina tsara ny tanjona sy ny mekanika an'ity lalao ity. Tsy maintsy mamorona làlan'ny karatra ianao, mampiditra azy ireo arakaraka ny fanisana ny tarehy tsirairay, amin'ny filaharana miakatra na midina. Ny karatra tsirairay dia azo ampifandraisina amin'ny karatra teo alohany na teo alohany na amin'ny iray amin'ireo vazivazy.
eto tsy maintsy ataonao tsiroaroa ny karatra izay manampy hatramin'ny telo ambin'ny folo, toy ny Pyramid Solitaire ihany. Rehefa esorinao eo an-tampon'ny antontam-bato ireo karatra, dia havadika ireo karatra manaraka, ka hanokatra fomba vaovao hifangaroana amin'ireo karatra efatra an-tànanao.
Ny haingam-pandeha no zava-dehibe, farafaharatsiny amin'ity lalao ity. Manohitra ny solosaina dia tsy maintsy haingana ianao ary manala ireo karatra rehetra amin'ny antontam-bolanao. Mba hanaovana izany, apetraho ao anaty iray amin'ireo piles roa eo afovoan'ny efijery ny karatrao, arakaraka ny fanisana ny karatra etsy ambany, dia tokony ho isa iray avo kokoa na ambany noho ny karatra eo ambony latabatra fotsiny.
Lalao hafa mifandraika amin'ny fanafoanana ny karatra arakaraka ny isan'ny tsirairay. Ny maha samy hafa azy dia tsy maintsy esorinao ireo karatra hanafaka ny trano mimanda amin'ny tilikambo telo eo ambany, mandinika hatrany ny sandan'ny karatra asongadina eo ambanin'ny efijery.
Ny faharetana sy ny lamaody miaraka, amin'ny lalao mahafinaritra be. Tsy maintsy esorinao ny karatra rehetra izay eo amin'ny efijery amin'ny fotoana itafiananao ny maodely tsirairay. Mba hanangonana ireo karatra any ambany, apetaho ireo karatra izay manana ny karazany mitovy, ankoatry ny fiheverana: ny sasany amin'ireo maodely dia manana ny safidiny amin'ny loko, pirinty ary fomba.
Tsy misy isalasalana, ny tena mahaliana indrindra rehetra. Tsy maintsy esorinao eo amin'ny efijery ireo karatra Mahjong sy lalao fahatsiarovana- Ataovy tsiroaroa izy ireo hampihodina ireo karatra izay eo amin'ny farany ambany ary, mba hanokafana ireo karatra misy hidin-trano, tadiavo ireo karatra misy fanalahidy nalaina.